ကိုယ့်ချစ်သူ နဲ့ကိုယ်ပိုပြီးရင်းနှီးလာအောင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ? – Trend.com.mm
ကိုယ့်ချစ်သူ နဲ့ကိုယ်ပိုပြီးရင်းနှီးလာအောင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ?
Posted on August 31, 2019 August 30, 2019 by Shun Lei Phyo
အဲ့လဲ့ …ချစ်သူရည်းစားရှိသူတိုင်းသိထားသင့်တယ်နော် :-P. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်သွားကြတာ ဟာမခက်ခဲပင်မဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လက်မလွှတ်ချင်လောက်အောင်ချစ်ဖို့ အတွက် နည်းနာလေးတွေလည်းအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက သပ်သပ်ညစ်ပတ်ပြီး လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ယောက်အချစ်ကို တစ်ယောက်ပိုမြင်လာနိုင်စေတဲ့နည်းလေးတွေပါ….
မျက်လုံးချင်းစကားပြောအောင်လုပ်ပါ။ မျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်ဆိုတာ ချစ်သူတွေကြားချစ်မြတ်နိုးချင်းကို ပိုပြီးတိုးပွားစေတာမလို့ မျက်လုံးချင်းများများစကားပြောတတ်ပါစေ။
(၂) သူနဲ့ကိုယ်ပဲ သိတဲ့စကားထာမျိုးထာသင့်တယ်
သူနဲ့ကိုယ်ပဲနားလည်တဲ့ ဘာသာစကားမျိုး တွေ၊ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ချင်းနီးစပ်တဲ့စကားမျိုးတွေကို များများပြောပေးပါ။ ဒါမှစိတ်ချင်းဝေးသွားတာမျိုး မဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး။
(၃) သူ့ဘက်က စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုးကို စောင့်ပါ
ကိုယ့်ဘက်ကပဲတစ်အားမျှော်လင့်နေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ ကိုယ့်အပေါ်သိပ်ကိုလေးနက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး သူ့စိတ်ကိုယ့်အပေါ်ပိုရောက်လာအောင် သူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုယ့်အပေါ်ပိုလာအောင်နေကြည့်ပါ။
(၄) သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ဖုံးဖိမထားပဲ သွက်သွက်လက်လက်ပြင်ဆင်ပါ
သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်တာမျိုးအဖြစ်မခံပဲ တစ်ဖက်လူကသင်ပေးပြောပြပေးချင် တာမျိုးဖြစ်နေပါစေ။
အဲ့လဲ့ …ခဈြသူရညျးစားရှိသူတိုငျးသိထားသငျ့တယျနျော :-P. တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြသှားကွတာ ဟာမခကျခဲပငျမဲ့ တဈယောကျကို တဈယောကျလကျမလှတျခငျြလောကျအောငျခဈြဖို့ အတှကျ နညျးနာလေးတှေလညျးအနညျးငယျလိုအပျပါတယျ။ ဒါက သပျသပျညဈပတျပွီး လုပျတာမြိုးမဟုတျပဲ တဈယောကျအခဈြကို တဈယောကျပိုမွငျလာနိုငျစတေဲ့နညျးလေးတှေပါ….
မကျြလုံးခငျြးစကားပွောအောငျလုပျပါ။ မကျြလုံးခငျြးစကားပွောတယျဆိုတာ ခဈြသူတှကွေားခဈြမွတျနိုးခငျြးကို ပိုပွီးတိုးပှားစတောမလို့ မကျြလုံးခငျြးမြားမြားစကားပွောတတျပါစေ။
(၂) သူနဲ့ကိုယျပဲ သိတဲ့စကားထာမြိုးထာသငျ့တယျ
သူနဲ့ကိုယျပဲနားလညျတဲ့ ဘာသာစကားမြိုး တှေ၊ သူနဲ့ကိုယျနဲ့စိတျခငျြးနီးစပျတဲ့စကားမြိုးတှကေို မြားမြားပွောပေးပါ။ ဒါမှစိတျခငျြးဝေးသှားတာမြိုး မဖွဈလာနိုငျတော့ပါဘူး။
(၃) သူ့ဘကျက စိုးရိမျပူပနျတာမြိုးကို စောငျ့ပါ
ကိုယျ့ဘကျကပဲတဈအားမြှျောလငျ့နတောမြိုးမဖွဈစပေဲ ကိုယျ့အပျေါသိပျကိုလေးနကျအောငျ အတတျနိုငျဆုံး သူ့စိတျကိုယျ့အပျေါပိုရောကျလာအောငျ သူ့ရဲ့စိုးရိမျမှုတှကေိုယျ့အပျေါပိုလာအောငျနကွေညျ့ပါ။
(၄) သငျ့ရဲ့အားနညျးခကျြတှေကို ဖုံးဖိမထားပဲ သှကျသှကျလကျလကျပွငျဆငျပါ
သငျ့ရဲ့အားနညျးခကျြတှကွေောငျ့စိတျပကျြစရာဖွဈတာမြိုးအဖွဈမခံပဲ တဈဖကျလူကသငျပေးပွောပွပေးခငျြ တာမြိုးဖွဈနပေါစေ။
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်တိုင်နားလည်နိုင်မဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း…
ဘီယာ၊အရက် သမားတွေ သိပ်ကို မှီဝဲသင့်တဲ့အစားစာ…